Amabhomu Akashokholethi Ashisayo (NgeMarshmallows!) - Ungadliwa
wazi kanjani ukuthi i-pecan pie yenziwe
ungayenza kanjani i-caramel chocolate egcwele
usawoti wedwala wokwenza u-ayisikhilimu
ungayipheka kanjani isoseji yaseTurkey emnandi
isaladi leqanda lihle kangakanani
Amabhomu Akashokholethi Ashisayo
Amabhomu eshokoledi ashisayo ayindlela emnandi futhi emnandi yokujabulela isiphuzo esijwayelekile esishisayo sikakhokho!
Le recipe yenza i-diy marshmallow kanye ne-cocoa egcwele ama-chocolate amabhola angancibilika obisini olushisayo ngomug ophelele woshokoledi oshisayo!
Liyini Ibhomu Likashokholethi Elishisayo?
Ibhomu likashokholethi elishisayo liyibhola elingenalutho loshokoledi eligcwele impuphu eshisayo ye-cocoa nama-marshmallows amancane. Ibhola lifakwa emugqeni wobisi olushisayo (noma amanzi) bese ukushisa kuyancibilika kudale umugqi ophelele kakhokho.
Zibukeka zikanokusho, kodwa empeleni ziyi-DIY ekhaya-fun fun project.
CHOCOLATE Sincoma kuphela ukusebenzisa ibha yoshokoledi osezingeni eliphakeme noma ushokoledi we-couverture.
Ama-wafers ancibilikayo noshokoledi banezengezo kuzo ezenza zingabi ngaphansi kokulungele lolu hlobo lweresiphi. Ukuncibilika kwamaswidi akuwona ushokoledi futhi akunconyelwe le recipe. Sebenzisa ushokoledi ophakathi kuka-55% no-80% kakhokho futhi udinga ukuba nebhotela le-cocoa njengesinye sezithako zokuqala.
UKUGCWALISA Ezinye izindlela zisebenzisa amathisipuni ama-2 kusipuni esingu-1 sempuphu eshokoledi eshisayo kepha asitholi ukuthi lokhu kwengeza ngokwanele ukwenza ukhokho oshisayo ocebile. Siphakamisa 1oz. amaphakethe (noma cishe izipuni ezintathu).
Noma yini ingangena ngaphakathi kwebhomu likashokholethi elishisayo- qala ngophawuda oshisayo wecocoa bese ufaka noma yini ongathanda (sithanda ama-mini marshmallows). Izicucu ze-caramel ezincane, ama-M & M amancane, noma yiluphi uhlobo lwe-sprinkles enemibala, ngisho nezicucu ze-caramel noma i-espresso powder encane! Kungani kungenjalo!? Amathuba awapheli!
Instant Funda Thermometer
Ukudla Safe Gloves
I-Rubber spatula, izitsha, ipani
Sebenzisa i-microwave ukwenza ukuncibilika kwalokhu chocolate kube lula kakhulu.
Ukugcina ushokoledi ubushelelezi futhi ucwebezela, uzofuna ukuwuthukuthelisa. Lokhu kusho ukuthi uyincibilikise ezingeni lokushisa elingu-88-90 ° F! Mane nje ushise bese uyaluza ku-microwave amasekhondi angama-30. Qhubeka uncibilike ngezikhathi zemizuzwana engu-15 kuze kube yilapho ushokoledi omningi uncibilika uqinisekisa ukuthi awushisi ngokweqile. Kufanele ube nezingcezwana ezincane zeshokholethi engaxutshiwe futhi uma uqhubeka uvuselela, izoncibilika.
Ngisebenzisa i-thermometer efundwa ngokushesha ukuqinisekisa ukuthi ngithola ukushisa okulungile kwemiphumela emihle. Kuzwakala kuxaka kodwa ngiyathembisa ukuthi kulula. Uma ushokoledi ungaphezudlwana kuka-90 ° F shesha ngokushesha ushokoledi ocekeceke kancane ukwehlisa izinga lokushisa.
Ukuhlanganisa Amabhomu Akashokholethi Ashisayo
Ncibilikisa ushokoledi iresiphi ngayinye ngezansi .
Faka isipuni esingu-1 setshokholethi kwisikhunta ngasinye usisakaze ngesipuni esincane. Ifriji ukuqina.
Uma usuqedile, gcwalisa isikhunta ngasinye ngoshokoledi oshisayo oshisayo nama-mini marshmallows.
Fudumeza ipuleti elincane ku-microwave bese ubeka isigcawu esingenalutho kupuleti, ngokwanele ukuncibilikisa imiphetho.
Yiphakamise ngokucophelela ususe ipuleti futhi uyivikele ebhombini eshokoledi eshisayo egcwele, sebenzisa umunwe ohlanzekile emaphethelweni ukuze uvale.
Hlanganisa amabhomu kashokolethi asele.
Qiniseka ukuthi ugwema ukuthola amanzi ekuncibilikeni ukuze uwavimbe angabi yi-grainy.
Ukuhlangana kuncibilika kancane ngaphezulu komphetho wesikhunta ngasinye ukuze kube lula ukusivala. Lapho imiphetho isivaliwe, fudumeza isipuni ngaphansi kwamanzi ashisayo bese ucindezela ngobumnene ngemuva kwaso emaphethelweni ukubenza babe yisicaba ngokuphelele.
Lapho amabhomu eseqediwe, cwilisa ingaphandle nge-icing enemibala bese ufaka ama-sprinkle noma amaswidi amancane ngomphumela wokuhlobisa ngokwengeziwe.
Ukuze Sebenzisa Amabhomu Kakhokho Ashisayo
Faka ibhomu eshokoledi eshisayo emgodini bese uthele ubisi olushisayo noma amanzi kuwo bese ulibuka livuleka! Govuza futhi ujabulele!
Ama-Faves amaningi we-Chocolate
ICaramel Chocolate Embozwe Izinduku ZasePretzel - kulula ukwenza
Ama-Strawberries Ahlanganisiwe - isipho esihle se-DIY
Ungcono Kunekhekhe Locansi - izithako ezi-5 kuphela
Amaqoqo e-Chocolate Cashew - umuthi ongabhakwa
I-Pudding ye-Chocolate eyenziwe ekhaya - intandokazi yokufunda
Ngabe umndeni wakho ubewathanda la mabhomu ashisayo ashokoledi? Qiniseka ukuthi ushiya isilinganiso namazwana ngezansi!
Isikhathi sokulungiselela1 ihora Isikhathi esipholileishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Esiphelele1 ihora ishumi nanhlanu imizuzu Izinkonzo6 UmbhaliUHolly Nilsson Enziwe ngezithako ezi-3 nje kuphela, la mabhomu kashokoledi azophumela kumugi o-creamy nolahlekile woshokoledi oshisayo uma ufaka ubisi olushubile kubo! Phrinta Phina
▢Sphere / Round Isikhunta (2.75 amayintshi ngaphesheya)
▢ Instant Funda Thermometer
▢12 ama-ounces ushokoledi izingubo zokulala noma ushokoledi osezingeni eliphakeme oqoshiwe njenge-Ghirardelli baking chocolate, uhlukaniswe - bona amanothi
▢6 amaphakethe wokuxuba ushokoledi oshisayo phakathi .85 oz. kanye no-1.25 oz. ngosayizi
▢8 ama-ounces ubisi lonke noma ubisi lokuzikhethela ukukhonza
Faka ama-ounces amahlanu kashokolethi endishini ephakathi ne-microwave imizuzwana engama-30, susa bese uyaluza. Qhubeka ne-microwave ngezikhathi eziyimizuzwana engu-15 uvuselela uze ucishe uncibilike (kufanele kube nezingcezu ezisele). Qhubeka ugovuze ukuze ukushisa koshokoledi kuncibilikise izingcezu ezingancibiliki.
Hlola izinga lokushisa ukuze uqiniseke ukuthi ushokoledi ufunda u-88-90 ° F. Uma izinga lokushisa lingaphezu kwama-degree angama-90, gxuma i-ounce eyengeziwe yoshokoledi uze uncibilike ukuletha phakathi kwama-degree angama-88-90. Le nqubo iqinisekisa ukuthi ushokoledi uyacwebezela futhi uyacwebezela futhi iyaqina.
Faka isipuni nge-isipuni esingu-1 soshokoledi ocibilikile kwisikhunta ngasinye bese usebenzisa emuva kwesipuni ukusisakaza, qiniseka ukuthi ufinyelela phezulu esihlalweni futhi ungashiyi noma yiziphi izindawo eziveziwe. Beka isikhunta ebhodini lokubhaka elincane bese usifaka esiqandisini imizuzu emihlanu.
Susa esiqandisini nasesipuni enye i-spoonful enqwabelene kwesinye sezikhunta bese uyisakaza njengolwelwesi lwesibili. Qinisekisa ukukwenza lokhu ngasikhathi sinye noma ushokoledi uzophola ngokushesha okukhulu ngaphambi kokuthi uwusakaze ngamunye. Friza imizuzu eyi-10.
Susa efrijini bese ubeka amagilavu ​​aphephe ukudla. Susa amagobolondo eshokoledi kusuka ekubunjweni.
Gcwalisa ama-Shells & Seal
Uma onke amagobolondo akho enziwe, microwave ipuleti imizuzu. Ingxenye yamagobolondo, uhlangothi oluvulekile lubheke ezansi, kupuleti elifudumele bese uziphotha ngobumnene ukuze bushelelezi onqenqemeni.
Beka amagobolondo ku-liner yekhekhe (noma epanini) ohlangothini oluvulekile bese ugcwalisa izimbotshana ngephakethe lomxube we-cocoa oshisayo nama-marshmallows.
Phinda uphinde usebenzise ipuleti imizuzu emibili ku-microwave. Ngasinye ngesikhathi, beka igobolondo ohlangothini oluvulekile phansi ukuze uncibilikise onqenqemeni bese ulibeka phezu kwelinye lamagobolondo agcwalisiwe ukuze uvalwe. Gijimisa umunwe wakho onqenqemeni ukuze ubushelelezi.
Vumela amabhomu eshokoledi ashisayo aphole imizuzu embalwa ukusetha. Phezulu nge-drizzle ushokoledi nama-sprinkles uma ufisa.
Ukwenza Ushokoledi Oshisayo
Ukwenza ushokoledi oshisayo, shisisa ubisi epanini elincane phezu komlilo ophakathi kuze kube yilapho imiphetho iqala ukuqhuma okususiwe bese uthela ibhomu le-chocolate elishisayo emgodini omkhulu bese unyakaza uze uxube ngokuphelele.
CHOCOLATE Sincoma kuphela ukusebenzisa ibha yetshokholethi esezingeni eliphakeme noma ushokoledi we-couverture phakathi kuka-55% no-80% kakhokho nebhotela le-cocoa efakwe ohlwini lwezithako zokuqala. Ama-wafers ancibilikayo noshokoledi banezengezo kuzo ezenza zingabi ngaphansi kokulungele lolu hlobo lweresiphi. Ukuncibilika kwamaswidi akunconyelwe le recipe. UKUGCWALISA Siphakamisa 1oz. amaphakethe (noma cishe izipuni ezintathu). ISIKHATHI SOKUDLULA: Isikhathi sokulungiselela nokungasebenzi sinembile ngesikhunta esingu-1 esenza amahafu ayi-6 (3 ephelele). Uma usebenzisa isikhunta esingu-2, isikhathi singancishiswa kancane, kepha kuthatha imizuzu engama-30 ukuncibilika, ukusabalala, nokuhlangana. Bese kuthi imizuzu eyi-15 kuye kwengama-20 baphole. UKUSHESHA UKUSHESHA: Uma usebenzisa ushokoledi wobisi uzofuna ukushisisa ushokoledi ube phakathi kuka-86-88 ° F futhi uma usebenzisa ushokoledi omhlophe uzofuna ukuthi ube phakathi kuka-82-84 ° F. Ukuze uvivinye ukuthi ushokoledi wakho uthukuthele yini, gcoba kancane ephepheni lesikhumba bese ulibeka esiqandisini imizuzu embalwa. Uma icwebezela futhi ifohla phakathi lapho uyikhipha bese ushokoledi wakho ufutheka, uma ugoba ngabe akunjalo. AMACEBISO OKWENGEZIWE
Amagilavu ​​asiza ukugwema izigxivizo zeminwe. Qiniseka ukuthi awuyithathi ipuleti elishisayo ngesandla sakho esinamagilavu ​​bese uthinta izinhlaka noma izoshiya uphawu.
Lezi zisetshenziswa kahle kakhulu ngemuva kokwenza noma kungakapheli amahora angama-24.
Abicah angadonsela ku-lint, ngakho-ke gwema ukuwomisa ngendwangu yesitsha. Bayeke bome noma baphathe ithawula lephepha.
Lokhu kwenzelwe isikhunta esingama-intshi angu-2.75 ngaphesheya. Uma usebenzisa isikhunta esihlukile, inani loshokoledi elidingekayo lizohluka.
Amakholori:107,Amakhabhohayidrethi:2. 3g,Amaprotheni:1g,Amafutha:ezimbilig,Amafutha agcwalisiwe:ezimbilig,I-Trans Fat:1g,I-Sodium:139mg,Potassium:1mg,Umucu:1g,Ushukela:18g,Uvithamini A:ezimbiliIU,I-calcium:ishumi nanhlanumg,Insimbi:1mg
Igama elingukhiyeamabhomu amahle kakhulu ashisayo, ibhomu eshokoledi eshisayo, iresiphi yebhomu eshisayo eshisayo, ungenza kanjani amabhomu ashisayo ushokoledi InkamboAmakhandlela, Ugwadule, Iziphuzo, Iziphuzo KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
Amagobolondo wePasta Ahlanganisiwe eTaco
Inkukhu Ebhakiwe YaseShayina Nerayisi
Izinkukhu Zokupheka Zezinkukhu Ezinempilo
I-Steak Fajitas eyosiwe
Ama-Meatballs amnandi kaLucy
I-Cheesy Ground Turkey Pasta
Iresiphi Engcono Kakhulu Yenyama